HomeIZAO TONTOLO IZAOAZIA86 China5 an'arivony no tonga any China-Europe
5 an'arivony no tonga any China-Europe
16 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 86 China, AZIA, EOROPEANINA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY 0
Nahatratra arivo ny isan'ireo serivisy fiarandalamby teo anelanelan'ny europe
Nahatratra ny 5 arivo 266 ny isan'ny fiaramanidina fiarandalamby anelanelan'i Chine sy Eropa tamin'ny valo volana voalohany amin'ny taona. Ny fitomboan'ny 25 isan-jato raha oharina tamin'ny taon-dasa, ny serivisy fiaran-dalamby dia andry varotra lehibe an'ny tetikasa Belt-Road. Ny serivisy fiaran-dalamby no tiana satria avo telo heny noho ny ranomasina sy ny lafo ampahadimin'ny fitaterana rivotra.
Ny serivisy fiarandalamby anelanelan'i Chine sy Eropa, izay nanomboka ny asany tamin'ny 2011, dia mivoatra haingana. Raha ny fanambarana nataon ny vondrona Railway any China dia ny isan'ireo sampam-pitaterana entana anelanelan'i Chine sy Eropa ao anatin'ny valo volana voalohany amin'ny taona 5 arivo dia 266. Tamin'ny taona lasa, ity isa ity dia 6 arivo 300.
Ny 2 arivo ny 845 arivo ny 250 arivo 2 arivo ny 421 arivo ny 210 voyage natao tany Eropa mankany China, ny XNUMX arivo ny XNUMX arivo ny XNUMX dia natao niaraka tamin'ny vilany XNUMX arivo.
Ny fiaran-dalamby olona-eropeana dia avo telo heny noho ny fandefasan'ny ranomasina üyor Tena ilaina be izany satria ny vidin'ny fitaterana an'habakabaka eo ho eo amin'ny fahadimy. Ao amin'ny 2011, ny isan'ny lamasinina, izay 17 ihany, dia nitombo haingana dia tonga tamin'ny 2018 arivo 6.
Ny serivisy lalamby Sino-Eropeana, andry manan-danja amin'ny tetikasa Belt-Road, dia antenaina hitombo haingana kokoa amin'ny taona ho avy rehefa mihamitombo ny varotra eo amin'ny roa tonta. (Radio Iraisam-pirenena any China)
Fomba fitetezam-paritra i Ödemiş İzmir 05 / 04 / 2013 Ödemiş Izmir Train Expeditionary maro an'isa Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) 3. Ankoatra ny fiaran-dàlan'ny 6 miara-miasa eo anelanelan'ny Ödemiş sy Basmane; Anisan'izany ny sidina fanampiny tsy natao afa-tsy amin'ny zoma, samedi, alahady ary andro fialantsasatra. Araka izany, ny fiaran-dalamby farany avy any Ödemiş mankany İzmir dia handeha amin'ny 19.20 isan'andro, raha hiala ao amin'ny 21.30 ny lamasinina farany avy ao Ödemiş mankany İzmir. Ireo mpiasam-bahoakam-bato ao amin'ny lalamby dia nilaza toy izao tao amin'ny fanambaran'izy ireo: ny flights 6 dia natao teo anelanelan'ny Ödemiş sy İzmir (Basmane). Ny hany lamasinina amin'ny Basmane mankany Ödemiş dia manampy amin'ny 21.30.
Vondrona Eoropeanina: Torkia sy ny Vondrona Eoropeana manamafy fifandraisana eo amin'ny Marmaray 30 / 10 / 2013 Vondrona Eoropeanina: Marmaray manamafy fifandraisana eo Torkia sy ny EU: Eoropeana sy aziatika lafiny Istanbul mifandray amin'ny tsirairay lalamby 'Marmaray Project', 90 ny Repoblikana fananganana. nanokatra ny lanonana tamin'ny lanonana. Solontenan'ny Vondrona Eoropeana ho any Torkia, ny Fampiasam-bola Eoropeana Banky, ny lehibe indrindra amin'ny Marmaray tetikasa izay manome fanohanana ara-bola ivelan'ny Vondrona Eoropeana ka hampahery fifandraisana eo amin'ny Vondrona Eoropeana sy ny Torkia, hoy izy. Ny tetikasa "Marmaray", izay manolotra fifandraisana lalamby eo anelanelan'ny faritra Eoropeana sy Aziatika ao Istanbul, teo ambanin'ny Bosphorus, dia nokarakarain'ny fandraisana anjara tamin'ny filoha Abdullah Gül, praiminisitra Recep Tayyip Erdoğan, ny filoha Somali Hasan Sheikh Mahmud, ny praiminisitra Japoney Şinzo Abe sy ny praiminisitra Romania Victor Ponta. Nosokafana tamin'ny lanonana iray.
Ny tetezan'ny Trans Siberiana dia tetezana eo anelanelan'i Eoropa sy Azia 20 / 06 / 2014 Ny lalamby Trans Siberiana dia tetezana manelanelana an'i Eoropa sy Azia: Ny tetikasa hanamboatra ny lalamby Trans Siberiana, ny lalamby lava indrindra eran'izao tontolo izao, dia noforonina tao amin'ny 13 June 1891. Ny mpanjaka Rosiana 3. Ny didy navoakan'i Aleksandra tamin'io andro io dia niteny hoe: Mandidy ny fanorenana ny arabe aho handalo an'i Siberia. Io lalamby io dia tokony hampifandray ireo faritra Siberia, izay manana harena maro be, mankany amin'ny lalamby anatiny. Sarotra be ny fidirana amin'ny harena voajanahary ao Siberia. Na izany aza, tany Siberia, 200 taona taorian'ny nanombohan'ny fivoarana dia nisy ny orinasa sy ny harena an-kibon'ny tany, ny seranana amoron-dranomasina. Ny làlan'ny ranomasina dia azo antoka, nefa mila fotoana be ny fotoana.
Fandevenana an'arivony 100 tany Ejipta no nofoanana 09 / 04 / 2013 Ny fanentanana fiarandalamby 100 an'arivony dia nofoanana tany Ejiptiana an'arivony 100 fitaterana lamasinina no nofoanana noho ny fitokonana natomboky nataon'ny Union of Machinists and Conductors tany Ejipta noho ny raharaha dia tsy noraisin'ny governemanta ny fitakian'ny fampiakarana. Nilaza ny tompon'andraikitra fa mpandeha an'arivony no voaloa ho an'ny tapakila, ary ny Railway ny fanjakana dia nahatratra 4 tapitrisa dolara (manodidina ny 600 arivo dolara) noho ny fikomiana. Amin'ny lafiny iray kosa, ny Filohan'ny Railway State Eglizy Hussein Zak, ny mpiasan'ny lalamby dia misokatra amin'ny fifampiraharahana mifanaraka amin'ny fangatahana ny saina, '' mila manelingelina ny rafi-pitaterana ny vahaolana fa tsy vahaolana hamelezana, "hoy izy. Anisan'ireo fitakiana nataon'ny Ejiptiana machinists ny fanatsarana ny karama sy ayda
Minisitra Arslan: "Hetsi-panoheran'ny 37 an'arivony 140 natao nandritra ny Bayram" 20 / 06 / 2018 Ny minisitry ny fitaterana, ny raharaham-bahiny sy ny fifandraisana Ahmet Arslan, Manampahefana avy any amin'ny seranam-piaramanidin'ny fanjakana (DHMİ) nomanin'ny Direction de la Réunion de Ramadan, anisan'izany ny Fetin'ny 8-17 tamin'ny volana janoary sy ny toeran'ny mpandeha. Ny Minisitra Arslan, 37 arivo 140 sidina avy any amin'ireo seranam-piaramanidina ara-toekarena misy eo anelanelan'ireo daty ireo ary ny mpandeha 5 arivo arivo no nanompo. Atatürk sy Sabiha Gokcen Airport ao Istanbul, Antalya, Ankara Esenboga, Izmir Adnan Menderes, Alanya Gazipaşa Airports in Mugla Dalaman sy Milas-Bodrum Armstrong milaza fa asa ho an'ny fizahan-tany, fa ny Eid al-Fitr fialan-tsasatra noho 365-8 Jona fotoana manodidina niaina mavesatra mpandeha fifamoivoizana hoy izy. ...
400 ao Haydarpasa. Asa
Androany amin'ny tantara: 17 Septambra 1919 Afyon nataon'i Milney
Fomba fitetezam-paritra i Ödemiş İzmir
Vondrona Eoropeanina: Torkia sy ny Vondrona Eoropeana manamafy fifandraisana eo amin'ny Marmaray
Ny tetezan'ny Trans Siberiana dia tetezana eo anelanelan'i Eoropa sy Azia
Fandevenana an'arivony 100 tany Ejipta no nofoanana
Minisitra Arslan: "Hetsi-panoheran'ny 37 an'arivony 140 natao nandritra ny Bayram"
Ny satelita manoloana ny tetikasa toeram-piasana Eoropeana ao Romania dia manomboka any Romania
Androany amin'ny tantara: 28 Oktobra 1944 Nanomboka ny serivisy voalohany amin'ny lamasinina teo anelanelan'i Diyarbakır sy Kurtalan.
Ny serivisy fiaran-dalamby avo lenta dia manomboka eo Kazakhstan sy Ozbekistan
Fanompoam-pitaovana fanampiny no nanomboka teo anelanelan'ny Ödemiş-Torbalı
Ny Tetik'asa BAŞKENTRAY dia hampitombo ny fahafahaizana mitondra fifandraisana isan'andro eo amin'ny 100 sy ny mpandeha an'arivony eo anelanelan'i Sincan sy Kayaş